नासाले यान पठाउँदै, जसले पृथ्वीका प्रत्येक व्यक्तिलाई १० करोड रुपैयाँ दिन सक्छ ! – Jagaran Nepal
संसारमा धनी बन्ने सपना नदेखेको मान्छे को होला ? कुनै दिन आकाशबाट पैसाको वर्षा हुनेछ र रातारात धनी बन्नेछन् भन्ने सोच्ने धेरै छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि एउटा खुसीको खबर यो हो कि तिनीहरूका लागि अब आकाशबाट पैसाको वर्षा हुनेछ ।
यो सोच अब केवल काल्पनिक मात्र रहेन । आकाशबाट पैसाको वर्षा नपरे पनि आकाशमा यस्तो अवश्य पत्ता लागेको छ जसले संसारका हरेक मानिसलाई हजारौं करोडको मालिक बनाउन सक्छ ।
वास्तवमा, स्पेसएक्सले अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाको साइके एस्टेरोइड एक्सप्लोरर मिशनको लागि आफ्नो फाल्कन हेवी रकेट दिन लागेको छ। यो अगस्ट १, २०२२ मा प्रक्षेपण हुनु अघि, स्पेसएक्सले जुन महिनामा आफ्नो फाल्कन हेभी रकेटको प्रक्षेपण गर्नेछ।
अगस्ट १, २०२२ मा, नासाले साइकी एस्टेरोइड एक्सप्लोरर मिशनको लागि एउटा यान पठाउँदैछ। त्यो मिशन यस्तो छ कि पृथ्वीमा हरेक व्यक्ति धनी बन्न सक्छ। यो क्षुद्रग्रह यस्तो सम्पत्ति हो कि पृथ्वीका हरेक व्यक्तिले यसबाट १० हजार करोड प्राप्त गर्न सक्छन् ।
यो क्षुद्रग्रह पूर्णतया फलाम, निकल र सिलिका मिलेर बनेको छ भन्ने वैज्ञानिकहरुले पुष्टि गरेका छन् । यदि यसमा रहेको धातुहरू बेचियो भने, पृथ्वीको हरेक व्यक्ति अरबपति बन्नेछ। यसमा जाने अन्तरिक्ष यानलाई साइकी नाम दिइएको छ । हामी तपाईलाई बताउछौं कि जुन क्षुद्रग्रहमा अन्तरिक्ष यान पठाउने तयारी भइरहेको छ त्यसको नाम १६ साइक हो।
सन् २०२२ को अगस्टमा प्रक्षेपण गरिने साइकी स्पेसक्राफ्ट मे २०२३ मा मंगल ग्रहको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रबाट बाहिरिनेछ। यस पछि, यो २०२६ मा १६ साइक क्षुद्रग्रहको कक्षामा पुग्नेछ। त्यसपछि उसले २१ महिनासम्म यो क्षुद्रग्रहको परिक्रमा गर्नेछन् ।
१६ साइकी नामको यो क्षुद्रग्रहमा करिब १० हजार क्वाड्रिलियन पाउण्ड बराबरको फलाम रहेको नासाले जानकारी दिएको छ । तपाईलाई भनौं कि यो १०,०००,०००,०००,०००,०००,००० पाउण्ड रकम बराबर हो । यो यति ठूलो रकम हो कि पृथ्वीमा प्रत्येक व्यक्तिले लगभग १० हजार करोड रुपैयाँका दरले भाग लगाउन सकिन्छ ।